यस अभियानलाई ‘मिलेनियम प्रोजेक्ट’ नाम दिइएको छ । पुस्तकको शिर्षक ‘तमुहरूको सम्पदा’ अथवा ‘गुरुङ ह्यारिटेज’ राखेको प्रोजेक्टका लेखक मध्येका ‘भेषभूषा र भाषा साहित्य’का समुह नायक, सुमलकुमार गुरुङले बताए ।
क्या.रि. राजु गुरूङको संयोजनमा सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष कार्यशाला सम्पन्न गरेर तमु बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले आ–आप्mना धारणाहरू कार्यशाला मार्फत पेश गर्दै आएका छन् ।
यतिबेला तमु फोरमको निर्देशकको हैसियतमा क्या.रि. राजु गुरुङलाई सर्वसम्मत चयन गरे पश्चात उनको नेतृत्वमा तमुहरूका धर्मगुरुहरूको राय बटुल्ने अभिप्रायले यहि आउने १६ सेप्टेम्बर २०१८को दिनमा सम्पन्न गरिने तमु धर्मगुरुहरुको बृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
त्यही कार्यक्रम सम्बन्धी खेगी गुरुहरूसँग आज फार्नबारो स्थित गुर्खा प्यालेस रेस्टुरेन्टमा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका सह–निर्देशक हरि गुरुङले सञ्चालन गरेको यस साधारण सभाको सभाध्यक्षता क्या.रि. राजु गुरुङले गरेका थिए ।
सभालाई फोरमका अर्को सह–निर्देशक क्या।रि। देवराज तमुले सबैलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको औचित्य बारे प्रकाश पारेका थिए । निर्देशक क्या.रि. राजु गुरुङले यस अभियानलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गर्नुका साथै हालसम्मको प्रगती संक्षिप्त रुपमा प्रकाश पारेका थिए ।
साधारण सभामा बोर्ड अफ काउन्सिलका अध्यक्ष मेजर रि. एलबी गुरुङ, धर्मगुरुहरू क्रमशः पैँडि पच्यु चिबा, यारजंग तमु, खेम्पो शिरलम गुरुङ र क्लिह्प्री चिबा दानबहादुर तमुलै सम्बोधन गरेका थिए ।
सभाको अन्तमा बोर्ड अफ काउन्सिलका उपाध्यक्ष क्या.रि. डेमबबहादुर तमुले धन्यवाद ज्ञापन गरेर सभा विसर्जन गरेका थिए ।